ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၂) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 23, 2013 at 13:46 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
accessary နှင့် accessory
မူလအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်အရ accessary သည် မှုခင်းတစ်ခုတွင် အားပေးအားမြောက်ပြုသူ၊ ကြံရာပါ၊ အလိုတူအလိုပါ အဆွယ်အပွားဖြစ်သည်။
accessory သည် အပိုပစ္စည်း၊ ဆင့်ပွားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ car accessories, computer accessories ။ သို့ရာတွင် ယခုအခါတွင် အဆိုပါစကားလုံးနှစ်ခု၏အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြား မှုမှာမှုန်ဝါးလာပြီး တစ်လုံးထဲကိုပင် အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခုလုံးအတွက် သုံးလာကြပြီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် accessory ကပိုအသုံးတွင်ကျယ်သည်။
Accused of စွပ်စွဲခံရသည်
The man was accused of the murder. ထိုလူသည် လူသတ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။
(The man was accused with the murder.) “လူသတ်မှုနှင့်စွပ်စွဲခံရသည်”ဟု မြန်မာလို တွေးပြီးရေးကာမှားလေ့ရှိသည်။
acquainted နှင့် acquaintance
acquaintance သည် noun ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ အကျွမ်းဝင်မှု ဖြစ်သည်။
Their acquaintance began to blossom. သူတို့ကျွမ်းဝင်မှုသည် ပိုဖွံ့ဖြိုးဝေဆာလာတော့မည်။
I made his acquaintance ataparty. ငါသူ့ကိုပါတီမှာအကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။
*Acquainted သည် adjective ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးသော၊ အထိအတွေ့ရှိသော အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
adapter နှင့် adaptor
မူလက adapter (-er) သည် ပြုလုပ်သူလူကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ an adapter ofanovel ၀တ္ထုမှီငြမ်းသူ။ adaptor (-or) အား လျှပ်စစ်ပစ္စည်း/ကြားခံကိရိယာ ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့ရာတွင်၎င်းစာလုံးနှစ်လုံးအား အဓိပ္ပါယ်တူအဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရေးထုံးတွင် သြဇာကြီးသောအဖွဲ့အစည်းအတော်များများကလက်ခံလာကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိအရေးအသားတွင် ကြိုက်နှစ်သက်သည့်စာလုံးပေါင်းနှင့်ရေးနိုင်သည်။ ရှေ့နောက် ညီမျှမှုတော့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတွင် -er နှင့်ပေါင်းပြီး အခြားတစ်နေရာတွင် -or ဖြင့်ပေါင်းခြင်းမျိုးရှောင်ရှားသင့်သည်။
This is just an administrative problem. ဒါက အုပ်ချုပ်မှုပြဿနာတစ်ခုရယ်ပါ။
administrative သည် adjective ဖြစ်သည်။ ၄င်းအား noun အနေဖြင့်သုံးကမှားတတ်သည်။ ၄င်း၏ noun သည် administrator ဖြစ်သည်။
(I work as an administrative ataco-operative.)
adverse နှင့် averse
adverse သည် “ကောင်းကျိုးမပေးသော၊ ဘေးဖြစ်စေသော” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
The ferries were cancelled owing to ADVERSE weather conditions.(= unfavourable) ဆိုးရွားသောရာသီဥတုကြောင့် ကူးတို့ယာဉ်များအား ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်။
averse အား “မကြိုက်သော၊ ငြင်းပယ်သော၊ ဆန့်ကျင်သော” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်သုံးသည်။
She is not AVERSE to publicity. (= opposed) သူကျော်ကြားမှုကိုဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်ပါ။
advice နှင့် advise
ဤစကားလုံးနှစ်ခုသည် မြန်မာကျောင်းသားတို့် အလွန်မှားလေ့ရှိသည့် အတွဲဖြစ်သည်။
advice သည် noun ဖြစ်သည်။ “အကြံဥာဏ်၊ ထောက်ခံချက်” ဖြစ်သည်။ adivise သည် verb ဖြစ်သည်။ “အကြံပေးသည်။ ထောက်ခံသည်။” ဟုဆိုလိုသည်။
My ADVICE is to forget all about it. (noun = recommendation) ကျွန်တော့်အကြံကတော့ အားလုံးမေ့ထားလိုက်ပါ။
What would you ADVISE me to do? (verb = recommend) ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအကြံပေးပါ့လား။
adviser နှင့် advisor
Adviser သည် British စာလုံးပေါင်းဖြစ်သည်။. Advisor ကတော့ ပိုအမေရိကန်ဆန်သည်။
ဤအတွဲတွင် -a နှင့်စသူသည် verb ဖြစ်သည်။ -e နှင့်စသူသည် noun ဖြစ်သည်။
Heavy drinking will AFFECT your liver. (verb) အလွန်အကျွံသောက်ရင် အသည်းထိခိုက်လိမ့်မယ်။
The EFFECT on her health was immediate. (noun) သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုက ချက်ချင်းဖြစ်လာမှာ။
GREENHOUSE EFFECT ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်, SIDE-EFFECT ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
The new manager plans to EFFECT sweeping changes. (verb = to bring about) မန်နေဂျာအသစ်က သိမ်းကျုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ ကြံထားတယ်။
Greta agrees with you. Greta is agree with you.
agree to/agree with agree နောက်တွင်လိုက်သည့် preposition ကိုမူတည်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းပါသည်။
I AGREED TO do what he advised. သူအပေးတဲ့အကြံကိုသဘောတူတယ်။
I AGREED TO all the conditions. စည်းကမ်းချက်များအားလုံးအားသဘောတူသည်။
I AGREED WITH all they said. သူပြောတာနဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်တယ်။ သူပြောတာ လက်ခံတယ်။
Alive နှင့် live
alive သည် adjective ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် be verb နှင့်တွဲရေးသည်။ live သည် adjective အနေနှင့်သုံးလျှင် /laiv/ လိုက်ဗ် ဟုအသံထွက်သည်။ verb အနေနှင့်ဆိုလျှင် /liv/ လစ်ဗ် ဟုအသံထွက်သည်။
Only three people were alive after the accident. မတော်တဆမှုမှာလူသုံးဦးပဲ အသက်ရှင်တယ်။
Only three people lived after the accident. မတော်တဆမှုမှာ လူသုံးဦးပဲအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တယ်။
* real live, live show (live recording)
alley နှင့် ally
An ALLEY isalittle lane. အဲလီ ဟုအသံထွက်သည်။ လမ်းကြားလေး ဖြစ်သည်။
An ALLY isafriend. အဲလိုင်း ဟုအသံထွက်သည်။ မဟာမိတ် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
bowling alley ဘိုလင်းကစားရာလမ်းကြောင်း
the Allies - ပထမနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသောနိုင်ငံများ
the countries that fought with Britain in the First and Second World Wars.
all most နှင့် almost
They were ALL (= everyone) MOST kind. သူတို့အားလုံးသည်အကြင်နာဆုံး များဖြစ်ကြသည်။
ဤနေရာတွင် MOST နေရာတွင် VERY ထည့်လိုက်လျှင်လည်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
The child was ALMOST (=nearly) asleep. ကလေးသည် အိပ်မောကျလုနီးပါးဖြစ်နေသည်။
Permalink Reply by Soe Yarzar on October 23, 2013 at 15:35
Permalink Reply by upokun on October 23, 2013 at 23:29
Thank you very much Saya zar ni (My Way!)
Permalink Reply by May Nann on October 24, 2013 at 14:34
Permalink Reply by ohnmar win on October 25, 2013 at 16:10
Permalink Reply by Thin Theingi on October 28, 2013 at 14:50